သဒ္ဓါလှိုင်း: စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ အခြေခံအချက်များ
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:13 AM
တန်းဖိုးရှိသော ဒဿနလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါမမရေ..
တကယ်မှတ်သားထိုက်စရာ စာစု၊ စကားစုလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားတယ် မသဒ္ဓါရေ။ အဲဒီစာစုတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါနော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ...
တိုက်ရိုက်ကို လာထိတာပါလား ညီမရယ်။ ကိုယ့်အတွက်များ ရေးထားသလား အောက်မေ့ရတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှု အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ နည်းဥပဒေသတွေပါဘဲ။ မှတ်သားထားလိုက်ဦးမယ်။ စိတ်ပူလောင်တဲ့အခါတိုင်း ဒီဥပဒေသတွေက စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါဘဲ။
သူတစ်ပါးကိစ္စတွေ ၀င်စွက်ရမှာ အရမ်းကို ၀န်လေးမိသလို မလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုကို လိုက်နာနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ် မသဒ္ဓါရေ။
ကျန်တာအားလုံး စိတ်ကို ဘောင်မခတ်တတ်ပေမယ့်.
ခဏခဏ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်တယ် အဲဒီအချက် နှစ်ချက်အတွက်..ကြိုးစားတော့ထိန်းနေတာပဲ..
ပုံမှန် တရားထိုင်ပါ ဆိုတာပါပဲ။
လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ....။
တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ ဒဿနလေးတွေကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အတက်နိုင်ဆုံး ကျင့်သုံးနိုင်သလောက်လေးတွေကိုတော့ ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ နောင်လည်း ကြိုးစားပြီး ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားကြည့်အုံးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
တကယ်သတိထား ကျင့်ကြံစရာ အချက်လေးတွေပါ..။
* ခွင့်လွှတ်နိုင်သလောက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်။
* သဘောကောင်းလွန်းလို့ ကိုယ်ကပဲ ခံရတာများပါတယ်။
* စိတ်ရောင်စုံတွေကြားနေရင်း ကိုယ်ပါ သက်တန့်လူသားဖြစ်နေပြီ။
* သည်းခံပါတယ်၊ သိပ်လွန်လာရင်တော့ ပြတ်ဆော်တတ်တဲ့အကျင့်ကို အခုထိဖျောက်လို့မရသေးဘူးကွယ်။
* ဟင်း..တခါတခါကျတော့လည်း မနေတတ်တာတွေကြောင့် လုပ်မိနေတယ်။
* အခုတော့ စိတ်ပဲရှိတယ်၊ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး(အမှန်ဝန်ခံသွားပါသည်)။
* နောက်ဆုံးအချက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ..၊ နှလုံးသွင်းမှတ်သားသွားပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ..။
နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေပါပဲ. ကျန်းမာပါစေ...
ဒီဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်တိုင်း မှတ်သားဖွယ်ရာအဖြစ် တစ်ခုခုကျန်ခဲ့တာမို့ ကျေးဇူးပါကွယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ပုံမှန်တရားထိုင်ပါ ဆိုတဲ့အချက်ကလေးက ခုတလောလေး ဝတ္တရားပျက်နေတဲ့ ကျွန်မကို သတိပေးနေသလိုပါပဲ..။ စိတ်ငြိမ်းချမ်း အေးမြစေဖို့ တကယ့်အဖိုးတန် အခြေခံအချက်တွေပါပဲရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
အမရေ အချက်တွေအားလုံးကြိုက်တယ် ကျေးဇူးပါ..
ကောင်းလိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေ။ နံပါတ် ၈ ကို သေချာလုပ်ဖို့ အားခဲထားတာ ကြာပြီ။ ခုထိ သေချာမလုပ်နိင်ခဲ့သေးဘူး။ ကြိုးစားအုံးမယ်။
အရမ်း မိုက်တယ်ဗျာ.. ဘာသာပြန်ဆိုပေမဲ့ မူရင်းရေးတဲ့ သူရဲ့ ရင်ခုန်သံနဲ့ ထပ်တူကျသွားတာ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်တယ်..
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဗြဟ္မာစိုရ် တရားတွေနဲ့လည်း ထပ်တူနီးပါး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတော့ ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ ပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုတောင် ဖြစ်မိတယ်.. နောင်လည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်.. မျှော်နေပါ့မယ်.. :)
စာစုလေးတွေက တန်ဖိုးရှိပြီး ဖတ်ရတာ ခွန်အားရှိတယ်။ကြိုက်လွန်းလို့ ကူးသွားခွင်ပြုပါ။ ကိုယ်တိုင် ဘာသာမပြန်နိုင်ပေမဲ့ သူများပြန်ပြီးတာကို တစ်ခြားသူများကို ထပ်ပြီးမျှဝေခွင့်ပြုပါ
ဖတ်ရတာနဲ့တင် စိတ်လေး ငြိမ်းသွားပါတယ် ... မသဒ္ဓါရေ ... အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ချမ်းမြေ့ပါစေ ....
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးကလည်း ဒီနေ့အလားတူပဲ ဟောကြားခဲ့တယ်။
သဒ္ဓါ ကြိုက်လို့ copy ကူးပြီး facebook ကနေ Share လိုက်တယ်။ ခွင့်ပြုပါ နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
if u got JESUS CHRIST u haveapeaceful life that is CHRIST gives u. u urself can not do anything because u have no power to overcome all thing for example forgiveness .do not pretend ur self that u can do please accept JESUS CHRIST and then u will be ok for everthing.
Thank you for your post, I like it. Haveanice day. I wish you can write new post again soon.